Uchwepheshe we-Semalt - Amathiphu Okuthi Ungamisa kanjani i-Google Ukukhwabanisa Iwebhusayithi Yakho Ye-WordPress
Ukuvimbela izinjini zokufaka indexing website yakho okwesikhashana uze udlulile isigaba sokuthuthukiswa kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekuthengiseni inthanethi. Njengomnikazi wewebhusayithi, inhloso yakho eyinhloko ukuthola i-Google ikhombise iwebhusayithi yakho futhi ubeke isikhundla esiphezulu kulezi zindlela zokuhlela ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ngemuva kokufaka i-WordPress yakho, ukumisa i-Google ekukhayeni isayithi lakho kuyinto yokuqala okufanele uyenze - erros no certificado de seguran?a. Isiteji sokuqala sokuthuthukisa iwebhusayithi yakho ingaba yingozi futhi isonakalise imizamo yakho yesikhathi esizayo ekusebenzeni njengomxhumanisi wokuthengisa. Into yokuqala ehlasela iningi labasebenzisi be-webmasters ngemuva kokuqala inqubo yokuthuthukisa amawebhusayithi ukushayela ithrafikhi nokumema ama-bots kanye nabakwa-crawlers ukuba babhale izingosi zabo.
Uvimbela kanjani izinjini zokusesha futhi uvimba iGoogle ekukhawuleni isayithi lakho? Lo mbuzo oshaya izingqondo zabaningi webmasters.
U-Igor Gamanenko, isazi esiphezulu esivela ku Semalt , unikeza lapha amathiphu futhi usikisela ukuthi ungamisa kanjani izinjini zokusesha ne-Google ekukhawuleni isayithi lakho okwesikhashana ukuze uhambise indlela yentuthuko yewebhusayithi yakho.
Ukusebenzisa iphasiwedi ukuvikela isayithi lakho ngeCanel
Ukubaluleka kokuvikela iwebhusayithi yakho entsha ngephasiwedi bese uvimba iGoogle ukuthi ikwazi ukukhwabanisa ingagcizelelwa kahle. Awufuni izinjini zokusesha zichithe iwebhusayithi yakho kusigaba sokuthuthukiswa. Njengomnikazi wewebhusayithi, ungakwazi ukuvikela kalula amafayela wakho wokubhalisa kusuka kudeshibhodi yakho yeCanel. Abakwa-Web crawlers njenge-Google abahluleka ukubhala futhi bafinyelele amafayela wokubhalisa avikelwe iphasiwedi. Ukuze iphasiwedi-ivikele ifayela lakho;
a) Qala i-akhawunti yakho ye-cPelel bese ukhetha 'Iphasiwedi Vikela Izincwajana'
b) Vula i-akhawunti yakho ye-Akhawunti 'yasekhaya' bese uchofoze 'Hamba..'
c) Khetha indawo lapho i-WordPress yakho ifakiwe khona
d) Khetha ngokusebenzisa iphasiwedi evikela lesi siqondisi bese uthayipha igama lerekhodi ukuze livikelwe ebhokisini elilandelayo. Chofoza inkinobho ethi 'Londoloza'
e) Emva kokuthola ikhodi yokuphumelela, buyela emuva kudeshibhodi bese udala igama lomsebenzisi nephasiwedi entsha. Chofoza ku- 'guqula umsebenzisi ogunyaziwe / engeza' ukumisa okwesikhashana i-Google ekukhawuleni isayithi lakho
Ukusebenzisa ifayela le-Robots.txt ukuvimbela izinjini zokusesha
Ukuvimbela ezinye izinjini zokusesha ne-Google ekukhawuleni ukufaka izintambo kuwebhusayithi yakho, ngokwenza ngesandla bese ulayisha ifayela lakho le robots.txt elakhiwe esiqondisweni sakho sesayithi futhi ulayishe izinjini zokusesha ne-Google ukungabhalisi iwebhusayithi yakho.
Okunye okunye ukusebenzisa i-inbuilt sici ku-WordPress yakho efakiwe ukufundisa izinjini zokusesha ukuba zingabambeleli iwebhusayithi yakho. Ukwenza lokhu;
a) Vula ideshibhodi yakho ye-WordPress bese uchofoza 'Izilungiselelo,' bese ukhetha 'Ukufunda.'
b) Khetha ku-'Daza izinjini zokusesha ekubhaleni le website 'bese uchofoze ku-' Londoloza Izinguquko 'ukuvimbela zonke izinjini zokusesha ekukhawuleni iwebhusayithi yakho okwesikhashana.
Iphasiwedi-vumela iwebhusayithi yakho usebenzisa i-plugin ye-WordPress
Njenge-webmaster, ungasebenzisa i-plugin ye-WordPress ukumisa i-Google ekukhawuleni isayithi lakho. Noma kunjalo, kunconywa ukusebenzisa i-plugin ebuyekeziwe ukuze kufeze imiphumela ephumelelayo. Yenza i-plugin yakho isebenze futhi uchofoze ku- 'Izilungiselelo.' Qala i-plugin yakho bese usetha iphasiwedi yakho entsha. Chofoza inkinobho ethi 'Londoloza Izinguquko' ukuze uvimbele izinjini zokusesha ekukhawuleni kusayithi lakho.
Ukugcina amarekhodi akho kanye nezibalo eziphephile kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekutheni ukudayiswa kwe-digital . Ukuvimbela injini yokusesha ye-Google ekukhwanyeni kanye nokukhomba i-website yakho kukunika isikhathi esanele sokuyithuthukisa futhi ufeze idatha ehlanzekile ngesikhathi sangempela. Sebenzisa amathiphu afakwe ngenhla ukuze umise i-Google namanye ama-injini yokusesha ekukhokheni isayithi lakho okwesikhashana.